Budget for Human Resource Development in Public Health Increased by K43 Billion | Myanmar Business Today
HomeBusinessBudget for Human Resource Development in Public Health Increased by K43 Billion
Budget for Human Resource Development in Public Health Increased by K43 Billion
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်သည်
The government budget for the human resource development public health sector is allocated K98 billion for the 2020-21 fiscal year, which represents K43 billion increase, according to Dr. Myint Htwe, Union Minister of the Ministry of Health and Sports.
Last fiscal year, the government used K55 billion for human resource development in the public health service sector.
For universal health care coverage, the ministry plans to use over K300 billion for medicines and equipment for the 2020-21 fiscal year, doubling the previous fiscal year’s budget.
The Ministry has sent 6,741 medical professionals to attend conferences, meetings, workshops and seminars, 1,669 medical professionals to various training and courses, 117 to masterclasses, and 79 for Ph.D. courses.
(၂၀၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတက်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ (၉၈) ဘီလီယံကျပ် လျာထားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ယခင်နှစ်ကထက် (၄၃)ဘီလီယံကျပ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောသည်။
ကုသရေးနှင့်ဆေးရုံပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုး၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားလာစေရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ထိုကဲ့သို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ယ ခင်နှစ်ကကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတက်ရန်အတွက် ကျပ် ၅၅ ဘီလီယံလျာထားခဲ့သည်။
ထိုအပြင် လူနာများကုသရာ၌ ဆေးဝါးများပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် လာမည့် (၂၀၂၀-၂၁) ခုနှစ်တွင် ယခင် ဘဏ္ဍာနှစ်ကထက် (၂) ဆ တိုးကာ (၃၀၀) ဘီလီယံကျပ် လျာထားကြောင်းသိရသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊သည်(၂၀၁၆) ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ မတ်လအထိ ပြင်ပနိုင်ငံများ၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး/ ညီလာခံ/ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ရန် (၆,၇၄၁) ဦး စေလွှတ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းအမျိုးမျိုး (၁,၆၆၉) ဦး၊ မဟာဘွဲ့သင်တန်း (၁၁၇) ဦးနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ (၇၅) ဦး တက်ရောက်ရန် စေလွှတ်ခဲ့မှုအပါအဝင် ပြင်ပနိုင်ငံများသို စုစုပေါင်း (၈,၆၀၂) ကြိမ် စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Previous articleCopperbrains introducesanew e-commerce solution based on Facebook Messenger for SMEs
Next articleCrowd ban eased to 30 people